मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै भीम आचार्यमाथि बज्रपात, आफ्नै भाई मृत भेटिए, के हो रहस्य ? — Imandarmedia.com
मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै भीम आचार्यमाथि बज्रपात, आफ्नै भाई मृत भेटिए, के हो रहस्य ?
काठमाडाैं । प्रदेश -१ का मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका सचिव भीम आचार्यका भाइ राम आचार्य सुतिरहेको ठाउँमा मृत फेला परेका छन्। ५९ वर्षीय आचार्य सुनसरीको इनरुवा-३ बख्खुटोलस्थित घरमा बिहीबार बिहान मृत फेला परेको प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापाले बताए।
बिहान अबेरसम्म ढोका नखुलेपछि करिब साढे ११ बजे आफन्तले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरीले घरको ढोका फोडेर शवको मुचुल्का उठाइरहेको छ। ‘घटना के कसो हो खुल्न सकेको छैन, प्रहरी टोलीले ढोका खोलेर शव निकाल्ने काम गरिरहेको छ,’ थापाले भने।
उनी सुतेको कोठामा किटनाशक विषादी फेला परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र कार्कीले बताए। घरमा श्रीमान-श्रीमती बस्थे। बेलुका गफगाफ गरेर अलग्गै सुतेका आचार्य बिहान मृत भेटिएका हुन्। डिएसपी कार्कीका अनुसार आचार्यले ओछ्यानमा वान्ता गरेको पाइएको छ।
‘छोराहरू काठमाडौंबाट आएपछि पोष्टमार्टममा लैजाने तयारी छ,’ कार्कीले भने। प्रदेश स्थापना भएदेखि नै मुख्यमन्त्री बन्न निरन्तर प्रयासरत एमाले सचिव भीम आचार्य अन्ततः तेस्रो प्रयासमा सफल बनेका छन्।
आचार्यले यसअघि शेरधन राईसँग एमाले संसदीय दलमा प्रतिष्पर्धा गरेर हारेका थिए। पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेको थियो। तर फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि आचार्यको मुख्यमन्त्री बन्ने दौड रोकिएको थियो। पछिल्लो समयमा अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएपछि उनले नेपाल समूहको साथ छाडेका थिए।